Imiboniso ebonisiweyo Ngexesha lokuhamba kuTransya Express | RayHaber | raillynews
ikhayaTHE WORLDASIA98 IranImiboniso ebonwe ngexesha lokuhamba eTransya Express
28 / 01 / 2020 98 Iran, ASIA, THE WORLD, railway, JIKELELE, ZOMHLATHI, ETURKEY
Ukukhanya kubonwe ngexesha lokuhamba okucacileyo kohambo
ETurkey Iran ukuba kumazwe top 10 kakhulu watyelela kuMbindi Mpuma ayikho into emangazayo. Kutheni? Esona sizathu sikhulu ziimbono ezintle zala mazwe mabini. Wonke Lout Desert eKapadokiya kunye Pamukkale eTurkey e Iran okanye weva Kashmir Island. Inene, indalo kamama yanika la mazwe mabini mihlaba mihle kunye neempawu zomhlaba. Esi sisizathu ezininzi eziphambili emhlabeni wonke Turkey hayi umkhweli.
Kodwa ngoku sifuna ukukuxelela malunga neminye imizekelo eyahlukileyo yendalo enokubonwa ngeTransasya Express. Ukudibanisa uhambo ezimbini zoololiwe kunye nokuhamba ngenqanawa, olu hambo lude luzisa bonke abakhweli inyathelo elinye kufutshane nomoya ophefumlayo woMbindi Mpuma kunye naseNtshona yeAsia. Uhambo luxhumanisa iintloko ezimbini, i-Ankara neTehran.
Kuqala kwinto zonke, TransAsia ndikhwele, indalo zingabanjwanga yaye bobabini Turkey kwaye yeyona ndlela ibalaseleyo ukufumana kwiidolophana ezincinane nakwiidolophu e Iran. Kwakhona, nge eyahlukileyo umbala elinomtsalane ebomvu kwaye ziya kuwela umlambo Kizilirmak, elide kummandla Turkey. Uya kuba nethuba lokubona i-2 km ubude i-Euphrate ibhulorho eyakhiwe kwiDama laseKeban.
Keb IDama yesine inkulu dam Ngcayechibi Turkey kwaye ubuhle iyamangalisa ngokwenene. Abahambi abahamba ngololiwe waseTransasya ohamba phakathi kweVan neTatvan ngesikhephe. Uhambo lokuhamba ngesikhephe luthatha malunga neeyure ezi-4 kwaye lubaleke ukuwela iLake Van, elona chibi likhulu laseTurkey. Eli chibi alidumanga nje ngobukhulu bawo, kodwa nakwiziqithi zalo ezincinci. Enye yezi ziqithi yiAkdamar, apho icawa yase-Armenia yakhiwa khona ngenkulungwane ye-11 kwaye isavulekele abakhenkethi. Olunye ubuhle bendalo obunokuthi bubonakale kuwe ichibi le-Urmia. Le yichibi letyuwa elahlukileyo kwintshona yeIran, apho uloliwe waseTransasya kufutshane neTabriz naye uyema.
E TransAsia Express, usenokuba Bavile nabo ukuba wena ngokwakho keşved Turkey ezahlukeneyo ngokupheleleyo Iran. (https://transasiatrain.com)
Igolide yabiwa ngexesha lokwakha uMarmaray
Isantya soLoliwe ohamba ngeHyperloop
Amatye ezikhumbuzo zakudala ezafunyanwa ngexesha kwakusakhiwa i-Yenikapı-Taksim metro…
Namhlanje kwimbali: 15 Azovikoy Dekovil umgca ngeJuni 1922 National Fight ...
Namhlanje kwimbali: nge-12 kaJulayi ngo-1915 i-Hejaz Railway Egypt ngexesha leMfazwe Yehlabathi I Mısır
Namhlanje kwimbali: nge-25 kaJulayi ukuya nge-2 Agasti ngo-1925 uSüleyman Sırrı Bey's Nafia…
Ngethuba lokubambisa i-Kangal Thermal Ukuthengiswa kuneTÜDEMSAŞ
Umbhobho weGesi weNdalo oqhutywe ngexesha leTramway Works e Eskisehir
Ngexesha lomsebenzi waseMarmaray, umshini womsebenzi wonakalisa ipayipi yamanzi ephambili (iVidiyo)
Imithi ithuthwa ihlala e-Eskişehir ngexesha lokwakha itrama
Uhambo lweTransasya Express